सिलिकॉन कार कुञ्जी हेड फोब सुरक्षात्मक आवरण केस
विवरण:सिलिकॉन कुञ्जी हेड फोब आवरण,सिलिकन कार कुञ्जी फोब सुरक्षात्मक आवरण,सिलिकॉन कुञ्जी प्रोटेक्टर प्रकरण
Home > उत्पादनहरू > सिलिकॉन कार कुञ्जी आवरण > सिलिकॉन कार कुञ्जी हेड फोब सुरक्षात्मक आवरण केस
मोडेल संख्या: VW1207
सुन्दर पृथ्वी co.Ltd7वर्ष को लागि चुम्बकीय टिकाऊ र फैशन सिलिकॉन कार कुञ्जी कवर उत्पादन मा केंद्रित छ । उत्पादनको लागि धेरै वर्षको अनुभवले हामीलाई उत्कृष्ट निर्माण प्रक्रियाहरू बनाउँदछ। VW S ilicon कुञ्जी आवरणको उत्कृष्ट डिजाइन , कडा उत्पादन गुण र उत्तम बिक्री सेवा तपाईंको लागि एक गारंटी हुनेछ।
2. सिलिकन रिमोट कुञ्जी आवरण तपाईंको VW GTI3बटन कार कुञ्जीका लागि उपयुक्त छ ।
3. हामी सिलिकॉन कार कुञ्जी होल्डको कुनै पनि प्यान्टोन रङ बनाउन सक्दछौं ।
6. सिलिकन रिमोट कुञ्जीको मामला हानिकारक, पर्यावरण अनुकूल, गर्मी प्रतिरोध, टिकाऊ, निविड़ अंधकार, धूल-प्रविधिका विशेषताहरू छन्।
VW GTI को लागि सिलिकन कार कुञ्जी धारक कुनै हानिकारक र पर्यावरणगत अनुकूल छैन। जब तपाइँ एक सुन्दर डिजाइन कुञ्जी कोसिस गर्नुहुन्छ तपाईंको हातमा VW GTI को लागि कवर , यो नरम, चिकनी र हल्का देखिन्छ। तपाईं VW GTI सिलिकॉन कार कुञ्जी आवरणलाई माया गर्नेछ जब तपाईंसँग छ।
तपाई स्वत:3बटन मनपर्छ धूल - प्रमाण सिलिकॉन जेल कार कुञ्जी आवरण जब तपाईंसँग छ। कुनै पनि प्यान्टोन रङ accepable हुन सक्छ
सिलिकॉन कुञ्जी हेड फोब आवरण सिलिकन कार कुञ्जी फोब सुरक्षात्मक आवरण सिलिकॉन कुञ्जी प्रोटेक्टर प्रकरण सिलिकॉन कुञ्जी सुरक्षा आवरण सिलिकॉन कुञ्जी फोब धारक सिलिकॉन कुञ्जी फोब कवर वन सिलिकॉन कुञ्जी एफओबी आवरण Vw सिलिकॉन कुञ्जी जैकेट आवरण